Amadolobha amahle eMphakathini waseValencian, kusukela eMorella kuya eGuadalest | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | | España, Iziqondiso
Thola amadolobha amahle oMphakathi waseValencian kuyinto elula kunazo zonke emhlabeni. Emazweni aseLevantine kunamadolobha amahle kakhulu eSpain futhi awanalutho angalususa, ngokwesibonelo, lawo ongawathola Madrid (lapha sikushiya i-athikili emayelana namadolobha aseMphakathini waseMadrid) In I-Aragón noma ku Galicia.
Kungakhathaliseki ukuthi ukhetha ugu noma uma uncika maphakathi nezwe, i- Umphakathi waseValencian inakho konke okudingayo. Imizana yasentabeni emangalisayo ebonakala iqoshwe edwaleni nasemadolobheni asogwini anamabhishi okuphupha namachweba amahle wokudoba. Konke lokhu kungasaphathwa ngamafa acebile amakhulu alawo mazwe. Kepha, ngaphandle kokuchitha isikhathi, sizokukhombisa amadolobha amahlanu amahle eMphakathini waseValencian.
1 Amadolobha amahlanu amangalisayo eMphakathini waseValencian
1.2 IPeñíscola, elinye lamadolobha amahle kakhulu eMphakathini waseValencian
1.3 IChulilla, engaziwa kahle phakathi kwamadolobha amahle kakhulu aseValencian
Amadolobha amahlanu amangalisayo eMphakathini waseValencian
Sizoqala ukuvakasha kwethu ingaphakathi lesifundazwe sase UCastellón ukuvakashela iMorella enomlando. Sizoqhubeka nalokho kwe Valencia futhi sizogcina kulokho kwe Alicante ukukubonisa elinye lamagugu alo amancane: IGuadalest, imemezele Indawo Yomlando-Nobuciko futhi yahlanganiswa nenhlangano Amadolobha amahle kakhulu eSpain.
Njengoba sikutshelile, iMorella iphakathi, enyakatho nesifundazwe saseCastellón, futhi igcwele umlando kuzo zonke izinhlangothi ezine. Eqinisweni, ingelinye lamadolobha abaluleke kakhulu esifundeni sase Ubuciko, eyathola leli gama ngoba yayingaphansi kwegunya labaphathi abakhulu bemiyalo efana neThempeli, iMontesa noma iSan Juan.
Umbono olula ojwayelekile weMorella usuvele uyamangalisa, futhi unamandla amakhulu inqaba kubusa izindlu, ezizungezwe udonga lwangenkathi ephakathi, zibukeka zilenga edwaleni elikhulu laseLa Mola lapho zikhona. Lesi sithabathaba esikhulu se-Arab sekhulu le-XNUMX esizungezwe yizindonga siqukethe izakhiwo ezifana ne-Governor's Palace, ithangi, amadokodo ahlukene kanye nemibhoshongo yasePardalea neHomage, phakathi kokunye. Njengokungathi lokho kwakunganele, izindawo zokuvubukula ezivela ezikhathini zase-Iberia, zamaRoma nezamaVisigoth zitholakele endaweni ezungeze le nqaba. Ngokukhethekile, eyokugcina ingenye ebaluleke kakhulu kuyo yonke indawo yaseMedithera.
Kepha akuyona into kuphela ongayivakashela eMorella. Kuyamangaza nje ukuthi isonto lamabhishobhi elikhulu laseSanta María, isakhiwo esikhulu samaGothic esigcina amafasitela aso engilazi angene ngekhulu le-XNUMX leminyaka. Phakathi kwamatshe ayigugu ahlala ngaphakathi, kukhona izitebhisi ezijikelezayo ezingena ekhwayeni, i-Altar Ephakeme, isitho nomdwebo Sassoferrato.
Ifa lezenkolo laseMorella ligcwaliswa ngamasonto aseSan Juan, eSan Miguel naseSan Nicolás, isigodlo saseSan Francisco, indawo yaseSanta Lucía nendawo engcwele yeVirginana yaseVallivana, esivele cishe ingamakhilomitha angamashumi amabili ukusuka edolobheni.
Kepha usenokuningi okumele ukwenze ngalo. I- umsele waseSanta Lucia Kungumsebenzi omuhle kakhulu wobunjiniyela bamanzi ngesitayela seGothic, lapho noMkhandlu Wedolobha ungowakhona. It Ubuye eziningi izindlu zezindlu njengaleyo kaCardinal Ram, eyeCofradía de Labradores noma eyeMarquis de Cruilles. Futhi, ngaphandle kwedolobha, unendlu enezivikelo eziqinile zeBrusca neCreixell. Ekugcineni, kufayela le- imihume yangaphambi komlando kaMorella la Vella kunemidwebo yomhume ehlukaniswe njengeGugu Lomhlaba.
IPeñíscola, elinye lamadolobha amahle kakhulu eMphakathini waseValencian
Ngaphandle kokushiya isifunda saseCastellón saseMaestrazgo, kepha esivele sinqenqemeni lolwandle, unedolobha lasePeñíscola, elingenamona ngokufela owedlule ngokobuningi baso nemvelo yemvelo enelungelo.
Mayelana neyokugcina, esikhathini sayo sikamasipala kufakiwe ISierra de Irta, enye yezintombi nto kakhulu eMphakathini waseValencian. Kuphela, ngokunembile, olwandle, kwakha amawa amangalisayo afana nalawa I-Badum, lapho kugcinwa khona izinsalela zenqabayokulinda endala.
Kepha futhi unamabhishi amahle ePeñíscola. Phakathi kwabo, iNyakatho neNingizimu yasemadolobheni, iViudas noma iPebret. Ngokwakhe, odumile Snooker Kuyigebe elikhulu phakathi kwamatshe asolwandle lapho, ngezinsuku zemvula, ulwandle lukhuphuka.
Ngokuqondene nezikhumbuzo zalo, uphawu olukhulu lwedolobha yi Isigodlo sikaPapa Luna, ukwakhiwa kweTemplar okuyilawula kusuka egqumeni. I-Romanesque ngesitayela, yayakhiwe enqabeni yakudala yama-Arabhu futhi ine-basilica ngaphakathi. Ngokunjalo, omunye weminyango yawo, ingosi yeFosc, njengamanje ingenye yokungena ePeñíscola. Njenge-anecdote, sizokutshela ukuthi le nqaba isebenze njengendawo yokubeka uchungechunge nama-movie. Mhlawumbe okudume kakhulu kokwedlule kungukuthi Umdlalo Wamakhosi.
Kufanele futhi uvakashele esigodini saseCastellón i- Isonto laseSanta María, ehlanganisa iRomanesque neGothic nalapho u-Alonso de Borja, uPapa Calixto III wesikhathi esizayo, aqokwa khona njengombhishobhi. Futhi, eceleni kwayo, izizinda zeSan Antonio ne de la Virgen de la Ermitana, kanye ne Imnyuziyamu yolwandle, lapho ungabona khona ukuvakasha kwesiko lokudoba lasePeñíscola kusukela ezikhathini zasendulo.
IChulilla, engaziwa kahle phakathi kwamadolobha amahle kakhulu aseValencian
Sishiya isifundazwe saseCastellón siyofinyelela eValencia futhi sikubonise esinye sezimangaliso ezifihliwe zaleli zwe. Sikhuluma ngedolobha laseChulilla, elise- Isifunda saseLos Serranos, cishe amakhilomitha angamashumi ayisithupha ukusuka enhlokodolobha.
Ubuhle baleli dolobha lezindlu zabamhlophe nemigwaqo emincane kuyamangalisa. Itholakala enkabeni ephakeme ephezulu okuyisikhathi esidala isigodlo sama-arabi futhi lokho kukunikeza ukubukwa okumangazayo. Kepha, uma leli dolobha lihle, okuzungezile kunalokho kakhulu, kunemihosha engamamitha ayikhulu ukuphakama ngaphezu komfula iTuria nezindawo ezinjenge Isiziba esiluhlaza okwesibhakabhaka, ichibi elihle. Ukuze ubazi, sikukwazisa ukuthi ushayele umzila wamaxhaphozi.
Endaweni, ikakhulukazi kufayela le- umhosha waseFalfigueraUze ube nemidwebo yomhume. Ngokufanayo, sincoma ukuthi uvakashele ama-hermitages eSan Josepe naseSanta Bárbara. Ekugcineni, lapho ubuyela edolobheni, kufanele uvakashele i- ibandla leNtombi eNgelosi, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX futhi enezinto eziqoshwe nemidwebo kusukela ngekhulu le-XNUMX nele-XNUMX.
Imigede yamaMoor eBocairente
Okumangalisa ngokwedlula idolobha langaphambilini yiBocairente, nayo etholakala egqumeni elisenyakatho ntshonalanga ye USierra Mariola cishe amamitha angamakhulu ayisikhombisa ukuphakama. Konke lokhu kukwenza kube kuhle ukuqala izindlela zokuhamba izintaba.
Kodwa-ke, ukukhanga okukhulu kweBocairente yidolobha lakhona lakudala, kumenyezelwe Indawo Yomlando Yezobuciko. Ingxenye enhle yayo yenziwe nge Umakhelwane waseLa Villa, i-nucleus yakudala yangezikhathi eziphakathi egcwele imigwaqo emincane nemincane. Esikhathini esingokomlando sedolobha ungabona i- isonto leVirgin of the Assumption, eyakhiwe ngekhulu le-XNUMX, yize ihlanganisa isiGothic neBaroque.
Ezinye izikhumbuzo zenkolo ongazibona eBocairente yizindawo zeSan Juan, iVirgen de Agosto kanye neVergen de los Desamparados. Kepha okufuna ukwazi kakhulu yi- isigodlo sezindela, isigodlo esidala esingaphansi komhlaba esasinesonto ngisho.
Kodwa-ke, mhlawumbe uphawu lweBocairente yi- emihumeni yamaMoor. Ziyiqoqo lezimbotshana zokufakelwa ezenziwe ngekhulu le-XNUMX nele-XNUMX odongeni cishe ngamamitha angamakhulu amathathu ukuphakama. Akwaziwa ngokuqinisekile ukuthi behloselwe ini, kepha umbono owamukelwa kakhulu ngukuthi babeyizinqolobane eziqinisiwe.
Futhi kusuka esikhathini samaSulumane yiyona Umbhoshongo waseMariola, ebhalwe ngaphezulu kwegama elifanayo nokuthi, ngokufanayo, ibinendima yokuzivikela. Ungakhuphukela kuyo futhi ujabulele ukubukwa okuhle. Ekugcineni, sikweluleka ukuthi uvakashele inkunzi yenkomo eBocairente, eyakhiwa ngo-1843; iqhwa leSan Blas kahle, elisetshenziswa njengendawo yeqhwa kusukela ngekhulu le-XNUMX, kanye nesakhiwo seHotel L'Agora, esihlanganisa isitayela seNeo-Mudejar nesitayela seValencian Modernist.
Umkhandlu Wedolobha laseGuadalest
Ekugcineni, siza esifundazweni sase-Alicante ukukukhombisa elinye lamadolobha amahle eMphakathini waseValencian. Kutholakala, ikakhulukazi esifundeni se- UMarina Baja, endaweni ebabazekayo phakathi kwe- Izintaba ze-Aitana neXortá. Futhi, njengoba sikutshele, yamenyezelwa njengeNdawo Yomlando Nobuciko ngo-1974.
Isendaweni ecishe ibe ngamamitha angamakhulu ayisithupha ukuphakama, uphawu lwayo olukhulu yi isigodlo san san jose, inqaba yamaMoor yekhulu le-XNUMX ebusa sonke isigodi. Kwakungeyena yedwa edolobheni. Futhi sasinenqaba i-Alcozaiba, okuhlala kuyo umbhoshongo owodwa kuphela oyincithakalo.
Ngokwengxenye yayo, i Isonto le-Our Lady of the Assumption Yakhiwa ngekhulu le-XNUMX futhi isitayela seBaroque. Ijele elidala le-XNUMX lisendaweni ephansi yeTown Hall nase Indlu ka-Orduña Kuyisigodlo esihle kusukela ngekhulu le-XNUMX. Ngaphakathi, ngaphezu kwemidwebo, ungabona iqoqo elithandekayo lobumba.
Futhi lokhu kusiholela ekukutsheleni ngobunye ubuhlakani beGuadalest: iminyuziyamu yabo. Inezicishe zibe yishumi kanti ezinye zifuna ukwazi njengalezo ezinikezelwe ezigcawini zokuzalwa kanye nodoli, kuzinsimbi zokuhlukumeza, kumancane amancane noma ezimotweni zomlando.
Sengiphetha, sikukhombisile amadolobha amahlanu amahle womphakathi waseValencian. Kepha umhlaba waseLevantine unezinye eziningi. Ngokwesibonelo, Altea, nemigwaqo yaso emincane enezindlu zabamhlophe; UJátiva, nenqaba yayo enkulu; I-Villajoyosa, enezindlu zayo ezihlukile ezipendiwe (nakhu uya i-athikili ekhuluma nge-Villajoyosa) noma I-Sax, ebuswa inqaba enhle yangenkathi ephakathi. Awufuni ukuhlangana nabo?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » España » Amadolobha amahle Omphakathi waseValencian
Yini ongayibona ku-Limoges
Yini ongayibona eJaipur